बहुमुल्य सेयर सस्तोमा हात पार्न चाहनुहुन्छ ? यी पाच सुविधा काम लाग्न सक्छन् « Sajha Page
बहुमुल्य सेयर सस्तोमा हात पार्न चाहनुहुन्छ ? यी पाच सुविधा काम लाग्न सक्छन्
२३ पुस, काठमाडौं । तपाईले सेयर आदेश दिँदा के-के सुविधा प्रयोग गर्ने गर्नुभएको छ ? नेपालमा अहिले पनि सेयर किनबेच आदेशको क्रममा उपलब्ध हुने ६ सुविधा मध्ये २ वटाको मात्र प्रयोग अत्यधिक हुने गरेको छ । तर, अन्य सुुविधाको समेत प्रयाग गर्न सक्ने हो भने कतिपय अवस्थामा जोखिम कम गर्न र बहुमूल्य भइरहेको रहेका तुलनात्मक रुपमा सस्तोमा हात पार्न पनि सहयोग पुग्ने गर्छ ।
लगानीकर्तालाई रणनीति बनाउन समेत सहयोगी हुने सेयर आदेश सुविधा यस्ता छन्ः
अल अर नन (सबै वा कुनै पनि होइन)
सेयर खरिद आदेश दिदा यसरी तोकेर दिइयो भने ब्रोकरले तपाईले भनेको बराबरको सेयर पुरै खरिद गरिदिन्छ या भनेको बराबर सेयर पाइएन भने आदेश नै खारेज हुन्छ । नेपालमा यो सुविधा सेयर खरिदकर्ताले मात्र पाउँछन् । सेयर खरिद आदेश फारममा लगानीकर्ताले तोकेरै यो सुविधा उल्लेख गर्न पाउँछन् ।
तर बिक्रीकर्ताले भने यस्तो सुविधा पाउँदैनन् । अहिलेसम्मको कारोबार व्यवस्था अनुसार अड लट अर्थात् १ देखि ९ कित्ता सेयर किनबेच गर्न सकिँदैन । मानौं, कुनै बिक्रीकर्ताले कुनै कम्पनीको १ सय कित्ता सेयर बेच्न राखेको छ र पहिलो खरिदकर्ताबाट त्यही कम्पनीको ११ कित्ता मात्र सेयर खरिद गर्ने आदेश कुनै ब्रोकर मार्फत् आएको छ ।
यस्तोमा कारोबार त हुन्छ, खरिदकर्ताले ११ कित्ता सेयर नै पाउँछ तर बिक्रीकर्ताककहाँ बाँकी रहने ८९ कित्ता सेयर आदेशबाटै बाहिरिन्छ । कुनै पनि कारोबारमा खरिदकर्ताले तिर्न चाहेको र बिक्रीकर्ताले लिन चाहेको मूल्य भने एउटै हुनुपर्छ । बिक्रीकर्ताले अब बाँकी रहेको सेयर बेच्नै परेमा पुनः आदेश दिनुपर्छ ।
यो प्रणालीबारे बुझाई कम हुँदा कतिपयले यसमा धोका भएको भन्ने आरोप पनि लगाउने गरेका छन् । ११ कित्तासँग किनबेच म्याच गराएर अन्य रद्द गरियो भन्ने आरोप रहने गरेको पाइन्छ । तर, यो प्रणालीगत कमजोरी हो । हुन त अन्तराष्ट्रिय बजारमा किन्दा र बेच्दा दुबै अवस्थामा यो सुविधा पाइने गरेको छ ।
यस्तो सुविधा भएमा भने सहज हुने देखिन्छ । हुन त नेप्सेले नियमित कारोबारमा १ देखि ९ कित्तासम्ममा सेयर पनि किनबेच गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिरहेकोले पनि यो समस्या अन्त्य हुन सक्दछ ।
नन (कुनै निश्चित व्यवस्था नभएको)
यसमा जति कित्ता सेयर बिक्री वा खरिद गर्न राखियो, मूल्य र मागेको कित्ता पुगेमा कारोबार हुन्छ । नत्र रद्द नै हुन्छ । नेपालमा धेरै जसो खरिदकर्ताले नन र बिक्रीकर्ताले अल अर नन सुविधा लिएर सेयर कारोबार गर्ने चलन अत्यधिक छ ।
फिल अर किल (तत्काल किन वा रद्द गर)
बिशेष गरी सेयर आदेश दिँदा माथि उल्लेखित सुविधा दिनभरको कारोबारका लागि हुन सक्छ । यदि त्यो दिन कारोबार भएन त्यो किनबेच आदेश नै रद्द हुन्छ । यस्तोमा सेयर किनबेच गर्नै पर्ने भए भोलिपल्ट पुनः आदेश दिनुपर्छ । फिल अर किल सुविधामा भने सेयर मूल्य र सेयर कित्ता समान मात्र भएर हुँदैन ।
आदेश दिएको केही सेकेण्डमै त्यो सेयर किन्न वा बेच्न मिलेन भने आदेश नै रद्द हुन्छ । यस्तो आदेश दिएको केही सकेण्डमै कारोबार भयो भने भयो नत्र अरु आदेश जस्तो दिनभर आदेश कायम रहँदैन ।
अन्तराष्ट्रिय बजारमा सेकेण्डभन्दा कम समय पनि तोक्ने मिनिसेकेण्डको अभ्यास पनि छ । त्यहाँ एक दिनमा लाखौं किनबेच आदेश आउने भएकाले पनि यो सुविधा दिइएको पाइन्छ । बाहिरको बजारमा एकै दिन किनेको खरिद गरेको सेयर त्यही दिन पुनः बिक्री समेत गर्न सकिने ‘इन्ट्रा डे’ कारोबार समेत गर्न पाइने भएकाले यो सुविधाले मुनाफा सुरक्षित गरिहाल्न वा नोक्सान कम गरिहाल्न सहयोग पुग्ने गर्दछ ।
इमिडेट अर क्यान्सिल (तत्काल वा रद्द गर)
‘फिल अर किल’ जस्तै भए पनि यो सुविधामा भने केही फरक छ । यसमा किनबेच गर्न दिइएको बराबरको सेयर पुरै कारोबार नभएर त्यसमध्ये केही हिस्साको कारोबार भने हुनसक्छ ।
मानौं, १ सय कित्ता सेयर बिक्री गर्न राखिएको छ तर मूल्य समान रहने गरेर किन्ने आदेश भने ९० कित्ताका लागि मात्र उपलब्ध छ । यस्तोमा कारोबार हुन्छ । तर, ९० कित्ताको मात्रै । बाँकी रहने १० कित्ता सेयरको आदेश नै रद्द हुन्छ । बाँकी रहने १० कित्ता सेयरको लागि फेरि बिक्री आदेश दिनुपर्ने हुन्छ ।
एट दि क्लोज (बजार बन्द हुने समयमा मात्रै)
यो सुविधा लिएर सेयर किनबेचको आदेश दिँदा बजार बन्द हुने समयमा मात्रै कारोबार हुन्छ । तपाईले यो सुविधा लिएर दिनको जुनसुकै समयमा आदेश दिए पनि कारोबार भने बजार बन्द हुनु अगाडि मात्र हुन्छ । यो सुविधाले लगानी रणनीति बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ । कुनै दिन बजार कारोबारको मध्य समयसम्म बढ्ने र अन्त्यमा घट्ने पनि हुन्छ । हाम्रो बजारमा पनि पछिल्लो दिन यस्तै हुने गरेको छ ।
कुनै कम्पनीको सेयर कारोबारको पहिलो सत्रमा १० प्रतिशत वा ९ प्रतिशतसम्म बढ्ने तर बजार बन्द हुँदा वृद्धि २/३ प्रतिशतमा सिमित हुने सम्भावना भएमा यस्तो सुविधाको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
गुड टिल क्यान्सिल (रद्द नगरुञ्जेल अवधि रहने आदेश)
यो सुविधा लिएर सेयर किनबेच आदेश दिँदा लगानीकर्ताले सो आदेश रद्द नगरुञ्जेलसम्मका लागि त्यो आदेश बैध रहन्छ । नेपालमा यस्तो सुविधा १५ दिनका लागि दिइने व्यवस्था छ । लगानीकर्ताले चाहेको मूल्यमा चाहेको कित्ता सेयर खरिद वा बिक्री गर्न एकपटक आदेश दिएपछि यो सुविधा लिनेले १५ दिनसम्मको अवधि पाउँछ ।
त्यो अवधिमा पनि कारोबार म्याच नभए अर्थात् खरिद र बिक्री आदेश समान नभए आदेश रद्द हुन्छ । मूल्य बढिरहेको कम्पनीलाई दिनभर हुने मूल्य परिवर्तनको क्रममा तुलनात्मक रुपमा सस्तोमा हात पार्न यो सुविधा लिएर आदेश दिन सकिन्छ ।